‘नायक’ बने देवनारायण « Loktantrapost
‘नायक’ बने देवनारायण
१७ श्रावण २०७३, सोमबार ११:५७
झापा । मधेसी भन्ने वित्त्किै भारतीय समर्थक बुझ्ने गलत सोच धेरै नेपालीमा छ । यस्तो विभेदकारी सोचलाई बढावा दिन सबै जसो गैरमधेसी राजनीतिक दलले कहिँ न कहिँ भूमिका खेलेका पनि छन् । त्यसो त कतिपय मधेसी दलले कयौँपटक भारतीय समर्थक भएको जस्तो सन्दिग्ध चरित्र नदेखाएका पनि होइनन् ।
तर साउन १३ गते मधेसको मुख्य क्षेत्र सप्तरीमै एउटा भारतीय सीमामा घटना भयो । जसमा मधेसी समुदायका नेपालीले सीमामा एकपक्षीय रुपमा भारतपक्षबाट बाँधिएको बाँध भत्काइदिए । त्यसक्रममा भारतीयसँग लाठीमुङ्ग्रीसहित भिडन्त भएको थियो । नेपालको सीमा जोगाउने र भारतीयको दादागिरी विरुद्ध लड्ने सिलसिलामा तिलाठी–४ का ५२ वर्षे देवनारायण यादव भारतीय पक्षको हमलामा गम्भीर घाइते भए । यो घटना यो हप्ताको सर्वाधिक चर्चाको विषय भएको छ ।
सप्तरीको तिलाठीमा साउन १३ गते भारतीय पक्षबाट दशगजामा नदीको बहाव थुनेर तटबन्ध बनाएपछिको झडपमा घाइते भएका ती मधेसी नेपाली पूर्व जिविस सदस्य देवनारायण यादव हुन् । उनलाई हाल उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ । मधेशी समुदायको भएर पनि भारतीय दादागिरीविरुद्ध लडेको भन्दै देवनारायणलाई यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा नायकको दर्जा दिइएको छ । भारतीयको हमलामा घाइते भएका उनको रगतपच्छे शरीर फेसबुक र ट्वीटरमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि युवा अभियान नामक अनौपचारिक समूहको पहलमा यादव र उनीसँगै घाइते भएका दुर्गानन्द झालाई सप्तरीबाट काठमाडौँ ल्याएर स्वयम्भुस्थित प्रस्तावित मनमोहन शिक्षण अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना गरिएको छ ।
अभियानको पहलमा विराटनगरबाट विमानमा यादवलाई काठमाडौँ ल्याइएको अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यादवलाई आवश्यक उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित काठमाडौँमा रहँदा लाग्ने खर्च अभियानले नै जुटाउने अभियानका सदस्य राजेश राईले जानकारी दिएका छन् ।
के हो तिलाठी घटना ?
आफुहरूले दशकौँसम्म भारतसँग भिडेर सीमाको रक्षा गरिरहेको तिलाठीबासी बताउँछन् । यति हुँदा पनि सरकारले सहयोग नगरेको र उल्टै सरकारले मधेसीहरूलाई ‘भारतीय’ र ‘विहारी’ भनेको सुन्दा मन दुख्ने गरेको घाइते सप्तरीबासीको गुनासो छ ।
सप्तरीको तिलाठी गाविस र भारतीय गाउँ कुनौलीका बासिन्दाबीच बाँधका विषयमा वर्षौंदेखि विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक बिहीबार तिलाठी र भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत कुनौलीका बासिन्दाबीच झडप नै भयो । एकले अर्कालाई बाँसको भाटा लिएर जथाभावी कुट्ने काम दुबै पक्षबाट भयो ।
पूर्वजिविस सदस्य देवनारायण यादवको टाउकोमा १२ वटा टाँका लगाइएको छ ।
भारतीय पक्षले आफ्नो भूमि कुनौलीमा बनाएको बाँध नेपालीहरूले बिहीबार दिउँसो भत्काइदिए । सप्तरीसँगै सीमा जोडिएको कुनौलीमा भारतीय पक्षले बुधबारदेखि बाँध बनाउन सुरु गरेको थियो ।
भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा बनाएको बाँधले नेपालतर्फको आधा दर्जन गाविस जलमग्न हुने भएपछि नेपालीहरूले बाँधलाई भत्काएका हुन् । यो बाँधले सप्तरीको रम्पुरा मल्हनियाँ, तिलाठी, लौनियाँसहितका गाविसहरू जलमग्न हँँदै आएका छन् ।
भारतले केही वर्ष अगाडि नै यो बाँध एकतर्फीरुपमा बनाएपछि यी गाविसहरू डुबानमा पर्दै आएका थिए । यसैक्रममा अविरल वर्षाका कारण गत शनिबार आफैँ यो बाँध भत्कियो ।
बाँध भत्केपछि भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच तत्काल यो बाँध नबनाउने सहमति भयो । तर, बुधबारदेखि भारतीय पक्षले पूर्वसहमति विपरीत यो बाँध बाँध्ने काम सुरु गर्यो ।
नेपालीहरूले बिहीबार बिहानैदेखि बाँध भत्काउन गए पनि भारतीय पक्षका बासिन्दा धेरै भएपछि त्यत्तिकै फर्केका थिए ।
दिउँसोतिर नेपाली पक्षको सङ्ख्या धेरै भयो । त्यसपछि बाँधमा राखिएको बाँस र बालुवाका बोरा झिकेर नेपालीहरूले फालिदिए । त्यसपछि घटना केहीबेर साम्य भयो ।
साँझ ५ बजेतिर नेपाली पक्षका बासिन्दाहरू आआफ्नो घरतिर लागे । दशगजा क्षेत्रमा थोरै सङ्ख्यामा मात्रै नेपालीहरू थिए । त्यही मौका छोपेर दर्जनौँ भारतीयहरू त्यहाँ आए र पूर्व जिविस सदस्य यादव सहितका नेपालीमाथि अन्धाधुन्ध कुटपिट गर्न थाले ।
यादवलाई कुट्दै भारततर्फ लग्न खोजेपछि नेपालीहरू पनि जम्मा भए र दुबै पक्षबीच बाँसको भाटा तथा ढुङ्गा हानाहान भयो । तिलाठीका निरज झा भन्छन्, ‘यादवलाई कुट्दै भारततर्फ लग्न खोजेपछि हामी बचाउन गयौँ, तर भारतीयहरू हामीमाथि जाइलागे ।’
सरकार मौन ?
बिहीबार भारतीयहरूले नेपालीमाथि आक्रमण गर्दा भरपुर भारतीय सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिए । तर, नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति न्यून थियो ।
‘हामीले पटकपटक आफ्ना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखदेखि लिएर मन्त्रिस्तरसम्म कुरा राखिसकेको छौँ, तर हाम्रो समस्या कसैले सुनेको छैन’ यादवले भने ।
‘भारतीय विधायक बैद्यनाथ यादव अनसन बसेर आफ्नो भूमिमा बाँध बनाउन लगाए । तर, हाम्रा सांसदहरू यसबारेमा चासोसमेत राख्न सकेका छैनन्’, यादव थप्छन्–‘हाम्रै राज्यले हाम्रो समस्या समाधान नगरिदिँदा हामी आफैँ लड्न बाध्य भएका छौं ।’
भारतसँग भिडेका देवनारायण यादव मधेसीलाई भारतीय नभनिदिन आग्रह गर्छन् । उनको प्रश्न छ–‘भारतीयसँग लड्ने र नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने मधेसी कसरी भारतीय हुन्छन् ?’
घाइते पूर्वजिविस सदस्य यादव भन्छन्–‘मधेसीहरू भारतीय नागरिक हो, बिहारबाट आएका हुन्, भारतका चम्चा हुन् जस्ता शब्दको प्रयोग गर्दा हामीलाई एकदमै पोल्छ ।’
‘एक त भारतको जस्तो आफ्ना जनतालाई सहयोग नगरिदिने, समस्याको समाधान नगरिदिने र अर्कातर्फ शब्दरुपी बाण प्रहार गर्दा हामी न घर न घाटका भएका छौंँ’, यादव भन्छन्–‘हामी नेपाली हौँ र नेपाली नै रहनेछौँ, हामी मधेसीहरूलाई काठमाडौँमा बसेर त्यस्तो शब्दको प्रयोग नगर्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।’
प्रत्येक वर्ष विवाद
तिलाठीमा पानी निकासको विवाद प्रत्येक बर्ष हुने गरेको छ । प्रत्येक पटक नेपालीले भारतीय पक्षबाट गाली गलौज र कुुटाइ पनि सहनु परिरहेको छ’, स्थानीय सञ्चारकर्मी पङ्कज झा भन्छन्–‘बारम्बार हामीले आफ्नो प्रशासनलाई भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’
झाको भनाइमा भारतसँग बोल्न नसक्ने नेपाली प्रशासनले कुनै किसिमको ध्यान नदिँदा स्थानीय बासिन्दाले प्रत्येक बर्ष दुःख झेल्नु परिरहेको छ ।
‘०६४ सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले झण्डै हामीमाथि गोली चलाएका थिएँ’, पूर्वजिविस सदस्य यादव भन्छन्–‘त्यतिबेला जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणमार्फत आफ्नो भूमिमा बाँध बनाउने काम गरिरहँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर बन्दुक देखाउँदै आफ्ना ओभरसियर र इन्जिनियरलाई समातेर लगेका थिए ।’
धेरै दिनको छलफल र सहमतिपश्चात भारतीय पक्षले आफ्ना मान्छेलाई छाडेको र आफुहरूले जसोतसो बाँध बनाउने काम पूरा गरेको यादव बताउँछन् ।
पछिल्लो १५ बर्षयता लगातार रुपमा दुबै देशका बासिन्दाबीच झडप भइरहेको स्मरण सुनाउँछन् यादव । यादवको भनाइमा पहिला केही वादविवाद हुँदै आए पनि तीन वर्षयता झडप नै हुँदै आएको छ । भारतीय पक्षले कुनौलीमा एकतर्फी बाँध बनाएपछि झड्प हुन थालेको हो ।
(२०७३ साउन १७ गते लोकतन्त्र पोस्टमा प्रकाशित)